Izindatshana zika-Andre Oentoro Martech Zone |
Imibhalo nge U-Andre Oentoro
U-Andre Oentoro ungumsunguli we Isinkwa esingaphezu, inkampani yamavidiyo echaza umklomelo ethola umklomelo. Usiza ibhizinisi ukukhuphula amazinga okuguqula, avale ukuthengisa okuningi futhi athole i-ROI enhle evela kumavidiyo wokuchaza (ngaleyo ndlela).
NgoLwesithathu, Okthoba 9, 2019 NgoLwesithathu, Okthoba 9, 2019 U-Andre Oentoro
Mhlawumbe uzwile ngomvini wamagilebhisi ukuthi amavidiyo angukutshalwa kwemali okufanelekile kunoma yiliphi ibhizinisi elibheke ukuthuthukisa ukutholakala kwalo online. Lezi ziqeshana zikhulu ngokwanda kwamanani okuguqulwa ngoba zikulungele ukuhlanganyela kuzithameli nokudlulisa imiyalezo eyinkimbinkimbi ngendlela ephumelelayo - yini ongayithandi? Ngakho-ke, uyazibuza ukuthi ungaqala kanjani umkhankaso wakho wokuthengisa ividiyo? Umkhankaso wokumaketha ividiyo ungabonakala njengephrojekthi enkulu futhi awazi ukuthi yini